केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: ...............................
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 9:32 PM
के गर्ने ? सबै सम्बन्धित निकायका तलाचाभी हातमा हुनेहरु र राजनेताहरु शक्तिशालिताको घमण्ड, लोभ, लालच, नताबाद र कृपाबादको खिचातानी, घुसपैठ अनी चोरको हजार दाउ भने झै, हजारौ दाउ रच्दै कोठिमा लुकेर बसेका छन, मनमा गुन्दै होलान मेरो दाउ कहिले आउँछ ! तर ख्याती अनी उनी मात्र नभएर, हामी जस्तो साधारण झुपडिको बास हुनेलाई न्यायको आँखा कहिले पुग्ला ? एनी वे, मेरो पनि "निर्दोष र बालाबोध ख्यातीको चिरआत्माको शान्तिको कामना !"
हो, हिँसा-हत्याको कहालीलाग्दो दुष्चक्रमा गएर फँसेको छ हाम्रो देश। दण्डहीनताको वातावरण अपराधीहरुका लागि स्वर्ग हो। जबसम्म दलहरुले अपराधीहरुलाई राजनीतिक खोल ओढाएर जोगाईरहन्छन् तबसम्म स्थितिमा सकारात्मक परीवर्तन आउने सम्भावना देखिँदैन।
ख्यातिको आत्माले चीर शान्ति पाओस्!
बोल्न सक्दा बाँकी ख्यातिहरुको जीवन फूल्नु पर्ने हो तर बोलेर पनि केहि नहुने नबोलेर त झन हुँदै नहुने अवस्थामा पुगेर होला वाक्य रहित र निशव्द भईएको ।
मनु जि, धेरै राम्रो लेख्हरु त प्रकाशित गर्नु भएको रहेछ नि, धेरै खुशी लाग्यो तपाईंको लेख्हरु देखेर ।